अर्थनीति Archives - हिपत खबर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशभर अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवाहरू सर्वसुलभ र सस्तो दररेटमा उपलब्ध गराउँदै लगेको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रका लगभग सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिरहेको सेवाको आधुनिकिकरण तथा
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार रू. ४ अर्ब २३ करोड ३२ लाख बराबरको ट्रेजरी बिल विक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबोल प्रक्रियाबाट ९१ दिने र १ वर्षे (३६४ दिने)
काठमाण्डौ । पछिल्लो डेढ महिनादेखि निरन्तर उकालो लाग्दै आएको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा आईतबार अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार, आज छापावाला सुनको मूल्यमा प्रतितोला रु.
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नराख्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै अर्थ समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान
काठमाडौं। लामो समयपछि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले मंगलबार राति १२ बजेदखि लागू हुनेगरी प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ घटाएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको